नेकपा नेता भन्छन् : हामी बढी नै हौं,सिदा केही सिट गु,मायौं !
Homeराष्ट्रिय खबरनेकपा नेता भन्छन् : हामी बढी नै हौं,सिदा केही सिट गु,मायौं !
२३ मङि्सर ,काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपाले १४ मंसिरमा भएको उपचुनावको सबै ठाँउको समिक्षा रिपोर्ट केन्द्रमा बुझाउन दिएको निर्देशन अनुसार नेकपा प्रदेश नम्वर ३ ले आईतबार रिर्पाेट केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाएको छ । प्रदेश कार्यालयले प्रदेश भित्रका उप चुनाव भएका एउटा प्रदेश सभा र ७ ओटा वडा अध्यक्षको चुनावको समिक्षा रिपोर्ट केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाएको हो । चुनाव भएको क्षेत्रको समिक्षा सहित जिल्लाका इन्चार्ज सहइन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिवलाई प्रदेश कार्यलयमा बोलाई शनिबार समिक्षा गरेको थियो ।
प्रदेश सभा सम्म गुमाउँदा नमिठो र नमज्जा त हुने नै भयो । हामी कँहा चु क्यौं समीक्षा गरेर त्यसबाट पाठ सिक्नुपर्ने भयो । मुख्य कुरा–कँहा चुक्यौं भन्ने समिक्षा गर्दा मान्छेले अ न्र्त घा त भन्छन्, त्यस्तो त केही पनि देखिएन् । जनताको बीचमा जाने कुरामा नै हाम्रो मुख्य कमजोरी रहयो । जनतालाई विश्वासमा लिन पार्टी चु क्यो । पार्टी चु क्नुमा निम्न खालका कारणहरु देखिए, हामीले समिक्षा गर्दा । पहिलो, हामी दुई पार्टी एकताको प्रक्रियामा गत वर्ष आएका हौं । तर त्यो एकताको प्रक्रिया तलसम्म टुंगिएको छैन । चुनावमा जाँदा एकताबद्ध भएर जाने हुन्छ । कमिटिको आदेश भन्ने भएन । त्यसले गर्दा पनि अप्ठयारो भयो । कमाण्ड पार्टीको भएन, चुनाव प्रचार प्रसार तथा परिचालन कमिटि जस्तो बनाइयो, त्यसैको कमाण्ड मात्र भयो । त्यसमा हाम्रो आफनै आन्तरिक कमजोरी रह्यो ।
संसदीय निर्वाचन भनेको विपक्षी प्लानलाई क्रस गर्ने हो । नयाँ योजना बनाएर नयाँ ढंगले जाने हो । हाम्रा योजना बाहिर एक्सपोज भएपछि विपक्षीले त्यही अनुसारको रणनीति बनाए, हामीले त्यसलाई क्रस गर्न सकेनौं । जस्तोकी, सरकारको कार्ययोजनामा विपक्षीले कँहा कँहा वि रो ध गर्छ भन्ने थाहा हुदैन नी । त्यस्तै जस्तो भयो । जिल्लाको हकमा विशेष गरी भक्तपुर र चितवनका उपचुनावमा बढी केन्द्रीत भएर हाम्रा समिक्षा भए । जितेकोमा समिक्षा गर्ने कुरा त्यक्ति भएन । हारेकोमा कही न कही कमजोरी छ । त्यसवाट पाठ सिकेर एकताबद्ध भएर जानुपर्छ । जुन आँकलन हामीले गरेका थियौं, त्यो आँकलनमा हाम्रो प्रदेश सभा गुम्यो । चितवनको एउटा वडा गुम्यो ।
काँग्रेसमा मनोनित महामन्त्रीको सकस